Kurasikirwa kweData Paunenge Uchishandisa Scanpst Kugadzirisa Yakaora PST Mafaira
musha Products DataNumen Outlook Repair Kurasikirwa kweData Kana Uchishandisa Scanpst
Paunoshandisa Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) kugadzirisa rakakanganisika kana rakashatisa faira reOxpress mafaira (PST) faira, chishandiso chinogona kuwana zvikanganiso mufaira rePST, asi rinogona chete kudzosera chikamu chidiki che data, nezvose iyo data yakasara lost mune yakatarwa PST faira.
Iko kugona kwe scanpst kwakanyanya. Kana huwori kana kukuvara kweiyo PST faira zvakanyanyisa, ipapo scanpst inongokwanisa kudzoresa chikamu chidiki che data.
Iwe unofanirwa kushandisa chishandiso chehunyanzvi DataNumen Outlook Repair kugadzirisa iyo yakaipa PST faira. Nemaitiro epamusoro uye algorithm nzira, DataNumen Outlook Repair inogara ichidzorera most yeiyo inogona kudzoreredza fomu fomu yakaipa PST faira, zvakanyanya kupfuura izvo zvakawanikwa ne scanpst, saka ndiyo yakanakisa yekudzosera Outlook chishandiso mumusika.
Yakaora Faira Faira Rakagadziriswa ne scanpst Faira Yakagadziriswa na DataNumen Outlook Repair
(chete maforodha maviri akawanikwa, 2% maemail akadzorerwa
Kwayedza1_2_fixed (dolkr) .pst
(100% data rakadzorerwa)
(mafaira mana chete akadzorerwa, 0% maemail akadzorerwa)
Kwayedza1_3_fixed (dolkr) .pst
(chete 78% maemail akadzorerwa)
Kwayedza1_4_fixed (dolkr) .pst
(chete 49% maemail akadzorerwa)
Kwayedza1_5_fixed (dolkr) .pst